Al-shabaab oo ku hanjabtay inay weeraro hor leh qaadayaan. – Radio Daljir
Moqdisho, Oct, 30 ? Afhayeenka kooxda Al-shabaab Shiikh Cali Maxamuud ?Cali dheere? ayaa ku goodiyay inay weeraro hor-leh ku qaadi doonaan fariisimaha ay Moqdisho ku leeyihiin ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM.
Afhayeenka Al-shabaab ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Moqdisho ugu baaqay inay isaga ka fogaadaan, meelaha ay joogaan ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM, waxaana uu carrabka ku adkeeyay in laga yaabo waxyeelo inay shacabka ka soo gaarto weerarada iyo qaraxyada ay la bartilmaameedsanayaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, sida uu hadalka u dhigay Shiikh Cali dheere.
Shiikh Cali Dheer afhayeenka kooxda Al-shabaab ayaa waxaa uu ku faanay in weerarkii shalay kooxda Al-shabaab ku qaadeen AMISOM ay ku dileen, ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan, AMISOM. Waxaana uu hadalkiisa raaciyay inay sii laba-jibaari doonaan weerarada ay ku qaadayaan ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM.
Waxaa isi soo taraysay muddooyinkii ugu dambeeyay weerarada gaad-mada ah ee kooxda Al-shabaab ay la bartilmaameedsanayaan ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM, waxaana markasta oo dagaal uu dhaco ay 2-da dhinacba cod-baahiyaha ka sheegtaan guulo inay ka gaareen dagaalladii ay wada galeen.